Bedy lava | NewsMada
Mety hoe fanaitairana ny fitondrana no nitondran’ny masoivoho amerikanina ny kabariny, saingy rehefa dinihina tsara, fibedesana indray izany. Bedy satria miraviravy tanana amin’ny resaka kolikoly. Bedy satria mitazam-potsiny ny mpanondrana andramena. Izay aloha no tena nisongadina, saingy tsy izay ihany no efa nibedesan’ireo firenena matanjaka ny mpitondra malagasy.
Fa nahoana moa izy ireo no mibedy? Satria tsy takona afenina fa miankina betsaka aminy isika. Izy no mpandoa-bary, ka tsy azo iadiana. Mandray dia mimpirina, toa ireny ankizy bedy ireny sisa no azo hatao. Marina tokoa anie ilay nahabedy e!
Mbola ampahany fotsiny amin’ny endri-kolikoly nampitotongana ny firenena anefa io resaka andramena izay nahabedy io. Hitan’ireo mpitazana avy any ivelany fa loza manambana ho an’i Madagasikara izany, kanefa toa mbola matoritory ny tena voakasika indrindra. Jereo ity ady mangatsiaka eo amin’ny mpitandro filaminana, mpitsara, mpiasan’ny fonja sy ny fitondrana, sns. Porofo io fa tsy milamina ny toe-draharaha, satria ny tokony hifampiankina mihitsy no mifanosika…
Mbola hiandry mpanabedy? Avy eo mahaleo ny fon-dRamalagasy rehefa maheno fa ny avy any ivelany tokoa no mibaiko matoa afaka mibedy sy mandrahona. Ka zatra miantso sy miandry vonjy, na mbola loza tsy mihatra aza, sitrany ahay…
Mbola miasa ny governemanta. Efa heno siosio anefa ny fanovana. Oviana? Iza avy no esorina? Iza no hampidirina? Inona no antony? Fanontaniana miandry valiny. Ny voalohany, angamba, mbola miandry ny hevitry ny mpanabedy aloha. Sao mba misy hametra-pialana toy ny nataon’ny minisitra frantsay Taubira?